UWinnie Mandela uvinjelwe futhi wahlukunyezwa
1960 no-1961 kwaletha injabulo kuWinnie ngokuzalwa kwendodakazi yakhe yesibili, uZindiswa, nomyeni wakhe, uNelson Mandela, owatholwa emsulwa ekuthethweni kwecala lokuvukela umbuso ngo-1956. Injabulo yakhe yayifushane.
UNelson waphoqeleka ukuba azifihle, okwaguqula ngokuphawulekayo ubudlelwano babo. Manje kwakudingeka ahlangane nomyeni wakhe ozifihlile ezindaweni ezikude, efakwa emisebenzini yakhe eyimfihlo noma ngabe wayethanda noma cha. Ngo-Mashi 1961 uNelson wabanjwa wangena esitokisini. Lesi sikhathi uNelson waboshwa iminyaka engu-27.
Bebikezela ukuthi uWinnie uzoqhubeka nomsebenzi womyeni wakhe ngokumelene nohulumeni, amaphoyisa bamnikeze umyalelo wokuvinjelwa ngo-1962. Ngaphansi komyalelo wokuvinjelwa uWinnie wayebekelwe umkhawulo eGoli futhi wayevinjelwe ukungena ezindaweni zokufundisa noma ukuya emihlanganweni yabantu abangaphezu kwababili.Amphephandaba nawo avinjelwa ukulalela noma yini ayishilo.Wahlukunyezwa amaphoyisa bezama ukumsabisa nokuhlasela indlu yakhe.
UWinnie uchaze lokhu kuhlasela: "... ukuthi phakathi kwamabili lapho konke okuphathelene nawe kuthuli. Kusho ukuthi lezo zibani eziphazamisayo zakhanya ngesikhathi esisodwa kuwo wonke amafasitela endlu yakho ngaphambi kokuba isicabha sivuliwe. Kusho igatsha lokuphepha kufanele lifunde yonke incwadi endlini.
Kusho ukuguqula incwadi ngayinye emashalofini akho,, ukubuka ngaphansi kwemibhede, ukuphakamisa izingane zilele nokubuka ngaphansi kwamashidi. Kusho ukunambitha ushukela wakho, isidlo sakho sempuphu nazo zonke izipucu ekhishini lakho.
Ukukhipha zonke izingubo zakho futhi ukuvula isikhwama ngasinye. Ekugcineni kusho ukuthunjwa kwakho ekuseni, ukudonsa kude nezingane ezincane ukukhala nokubambelela kumphetho wakho, ucela umuntu omhlophe ehudula uMama ukuba amshiye yedwa. "
Ama-oda Wokuvimbela Okukhulu
NgoMeyi 1963 uNelson Mandela wahanjiswa ngokungalindelekile ejele eRobben Island. Lokhu kwakunzima kakhulu kuWinnie. Ukuze amvakashele kwakudingeka ahambe amakhilomitha angu-1 400 ukusuka eGoli ukuya eKapa bese esethatha isikebhe samakhilomitha angu-10 ahambe aye esiqhingini.
Lapho, wayevunyelwe ukubona uNelson imizuzu engamashumi amathathu, emi ngakolunye uhlangothi lwocingo. Abaphephisi besondele ngokwanele ukuzwa futhi bavunyelwe ukukhuluma isiNgisi noma isiBhunu kuphela. UWinnie uye wanikezwa umyalelo omkhulu wokuvinjelwa ngo-1965. Lo munye umvimbela ukuba angadluli kuphi ngaphandle kwe-Orlando West.
Kwadingeka ashiye umsebenzi wakhe njengesisebenzi sezenhlalakahle futhi wehluleka ukuthola umsebenzi omusha njengoba amaphoyisa esabisa noma ubani owayezomqasha. Amaphoyisa nawo ayephazamisa kakhulu esikoleni samadodakazi akhe ngaphambi kokuba uWinnie abathumele esikoleni eSwazini.